Muungaab: Wasiirada cusub halaga dhigo geesiyaal aan madaxweynaha ku ciriirineyn madaxtooyada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” ayaa ugu baaqay RW cusub ee Soomaaliya Cumar C/rashiid inuu xukuumadda usoo xulo wasiiro geesiyaal ah oo degi kara xaafado ka fog madaxtooyada Soomaaliya.
Muungaab oo xalay ka hadlay munaasabad lagu soo dhaweynayey RW Cumar oo lagu qabtay caasimadda, ayaa usoo jeediyey Cumar C/rashiid inuusan wasiirada kusoo darin xubno madaxweynaha ku ciriirnaya madaxtooyada.
“RW waxaan ugu baaqaa inuu soo magacaabo wasiiro geesiyaal ah oo aan madaxweynaha ku ciriirineyn madaxtooyada, islamarkaana deki kara xaafaaha kala duwan ee Muqdisho” ayauu yiri Muungaab.
“Wasiirada horay waa loogu baaqi jiray iney xaafadaha magaalada degaan, laakiin looma bilaabi jirin, hase ahaatee anigu waan u bilaabay, oo waxaan deganahay bartamaha magaalada” ayuu sidoo kale yiri gudoomiye Muungaab.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in wasiirada iyo madaxda dowladda oo iskooba hal meel ay dhiirigelineyso shakiga amaan xumida.
“Wasiiradu waa iney kasoo gudbaan jidka wadnaha, hadiid la isku koobo waxey dhiirigelinee in amaan xumo jirto” ayuu sidoo kale yiri Muungaab.
Muungaab wuxuu tilmaamay in degmooyinka gobolka Banaadir ay yihiin nabad lagana rabo wasiirada cusub inay muujiyaan nabadaasi oo bulshada ay dhex-degaan.
Dhanka kale general Xasan Maxamed Xuseen Muungaab Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa sheegay in Shacabka Gobolka Banaadir ay soo dhaweynayaan Raysal Wasaaraha Cusub ee Dalka Cumar C/rashiid Cali Sharmaake islamarkaana ay la shaqeynayaan.
Alshabaab oo hoos u dhigay muhiimadda sarkaal Xakariye Ismaaciil oo ka goostay